आज मिति २०७७ साल चैत २३ गते सोमबार , अप्रिल ५, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
सोमबार, २३ चैत्र २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । आज मिति २०७७ साल चेैत २३ गते सोमबार , । तदनुसार अप्रिल ५ तारीख ।
महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। मेहनतको फल अरूलाई सुम्पनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। समयमा सहयोग नजुट्दा अवसर फुत्किन सक्छ। काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ। बेसुरमा दिएको वचनले आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्नेछ। अप्ठ्यारो पर्दा मान्यजन र अग्रजहरूले साथ दिनेछन्। प्रतिकूल समयमा पनि सद्–व्यवहारले नतिजा अनुकूल हुन सक्छ।
छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि गरेको काम बन्नेछ। समयको मागअनुसार चल्ने प्रयास गर्नुहोला। बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। मेहनत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ